मृत्युपत्रमा हस्ताक्षर गर्दै महासमरमा हिंडेको दिन : क. अनुपम
जहाँ जिवनोत्सर्ग गरेका हजारौं सहयोद्धाहरूको आकृति पनि देखिरहेछु र त यो कुरा लेखिरहेछु । हजारौं घाइते योद्धाहरूको प्रतिबिम्बको झझल्को पनि आईरहेको छ । लाखौंलाख श्रमजीवी जनसमुदायको याद पनि उत्तिकै मात्रामा आईरहेको छ । र “रगत क्रान्तिको उर्जा हो ।” भन्ने महान गुरु क. मार्क्सको भनाइ पनि स्मृतिपटलमा घुमिरहेछ ।
यो अजीव पत्रहरू क्रान्तिकारी ज्ञान चेतले भरिपूर्ण छ । मालेमावादी दर्शनले लैस छ । सर्वहारावादी सिद्धान्तले ओतप्रोत छ । र मुटुको रगत जस्तै जीउँदो इतिहास पनि ।
यो क्यामेराको रिल घुमे झैं फनफनी घुमेर आईरहन्छ । आँसु, रगत र पसिनाको त्रिवेणीबाट गुज्रंदै आएको परिवेश चित्रमा कार्चोपी भर्नु झैं सजिलो थिएन । हुँदैन पनि ! यो त रक्ताश्रुमिश्रीत झन्झावातबाट पैदा भएको एक अकाट्य तथ्य थियो ।
सर्वहारा क्रान्तिको विज्ञान थियो । टाउकोमा आफू छोपिने कफनको फेटा बाँधेर शुरु गरिएको महान यात्रा थियो । वर्गसंघर्षको दावानलमा होमिएको छुट्टै खालको साहस थियो । शोषित-पीडित बस्तीहरूलाई ब्युँझाउने लम्बे अभियान थियो । सर्वहारावर्गको हक, अधिकार प्राप्त गर्ने एक चुनौतीपूर्ण बाटो थियो ।
यो कष्टसाध्य बाटोको बयान जति गर्दा पनि कम हुँदै जान्छ । र क्रान्ति अन्तिममा आएर सम्झौतामा टुंगिंदा दिल असाध्यै दुखेको आभाष पनि हुन्छ । संसदीय दलदलको बिरोध गर्ने र त्यहीँ आएर फँस्ने जस्तो विडम्बना अरु केही हुन सकेन । सर्वहारावर्गलाई ठूलो घात हुन पुग्यो ।
संसदीय प्रणालीलाई खसीको टाउको झुन्ड्याएर कुकुरको मासु बेच्ने अखडा भएको संज्ञा दिनु र अन्तिममा आएर त्यहीँ जाकिनु बहुत ठूलो विडम्बना मान्नुपर्छ । यसरी भावी पुस्ताले पनि नेपाली माटोमा फैलिएको जनयुद्धको अनुभूति गर्न पाउन । र जनयुद्धको मर्म कसरी पत्तासाफ भयो ? भन्ने शिक्षा लिन पाउन भन्ने उद्देश्यले यो संस्मरणात्मक अनुभूति पस्कन गईरहेको छु ।
केही समयअघि सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको पश्चिमी भाग बाँणेगाउँमा एउटा प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो । त्यतिबेला महान जनयुद्धको तेस्रो योजना आएको थियो । “महान सम्भावना र गम्भीर चुनौती” शिर्षकको दस्तावेज प्रस्तुत भएको थियो । त्यो प्रशिक्षणले मलाई निकै उद्वेलित बनायो । हुन त जनयुद्ध शुरु हुनु भन्दा अगाडि नै मेरो पार्टी सम्पर्क भएको थियो ।
घरमा बारम्बार माओवादी छापामारहरू आउने । कार्यक्रम गर्ने । बन्दुक पड्काउने गतिविधिहरू भएपछि हाम्रो घर प्रशासनको पहिलो निशानामा परेको थियो । तर पनि हाम्रो परिवार राजनीतिक परिवार भएकोले स्थितिलाई सहजतामा ल्याउने कोशिश गर्थ्यौं । र हामीले गाउँलेहरूलाई पनि आश्वास्त पार्न खोज्थ्यौं । विस्तारै संगठन बनाउँथ्यौं । र भित्रभित्रै फौजी र प्राविधिक तयारीहरू पनि गर्थ्यौं । मलाई फेरि सानै उमेरदेखि भरुवा बन्दुक चलाउने बानी परेकोले पनि केही साहस थपिएको थियो ।
ऋतुचक्रहरू फेरिंदै जाने क्रममा २०५४ सालको वर्षा ऋतु सकिएर हेमन्त ऋतुको आगमन भयो । हिलोमैलोहरू हट्दै गयो । र नेपालीहरूको महान चाड दशैं पनि आयो । दशैंको फूलपातीको दिन हाम्रो घरमा माओवादी नेताहरू बन्दुक बोकेर आए । रित बहादुर खड्का (चम्किलो तारा), ध्रुव पराजुली (सन्तोष), दावा शेर्पा (प्रकाश) लगायतका साथीहरू आए । बारुद बनाउने, बन्दुक पड्काउने गरे ।
र गाउँस्तरीय प्रशिक्षण सकेर गए । त्यो प्रशिक्षणमा क्रान्तिमा बन्दुक बोकेर हिंड्न को ? तयार छ ? भनेर हात उठाउन लगाए । हामी चार जना डम्बर थामी (अनुपम), देबेन्द्र थामी (चिमाल), ठिल बहादुर थामी (गगन), ईन्द्र बहादुर थामी (सागर) हामी चार जनाले हात उठायौं । वहाँहरूले हामीलाई दशैं मानेर आउनु भनेर जुँगु रित बहादुर दाइको घरमा सम्पर्कमा आउनु भनेर जानुभयो । यसरी हामी २०५४ साल असोज २५ गते बुबा आमाको हातबाट टीका लगाएर क्रान्तिको बाटोमा समाहित भयौं ।
मेरो बुबा आमालाई यो अर्थमा सलाम गर्न चाहन्छु कि क्रान्तिमा निसंकोच टीका लगाएर मलाई पठाउनुभयो । यस्ता बुबा आमा इतिहासमा विरलै पाईएलान । आफ्नो छोरालाई क्रान्तिमा निसंकोच क्रान्तिमा पठाउन तयार हुनुभयो । दशैंको रमझम चलिरहेको बेला हामी चाहिँ झोला बोकेर नयाँ उत्साह र उमंगकासाथ आफ्नो गाउँ घर, पाखा, पखेरा खोलानाला, वन जंगलबाट बिदाई हुँदै तामाकोसी तरेर जुँगुतिर उकालो लाग्यौं ।
- क. डम्बर थामी (अनुपम)